မြိုင်မြိုင် ဆိုင်ဆိုင် – My Blog
တီ…တီ… တီတီ…တီ…တီ…တီတီ… ကျွန်မနားထဲ ဆူညံနေအောင်ကြားနေရတဲ့ နှိုးစက်သံကြောင့် အိပ်ယာမှမထချင်ထချင်နဲ့ ထလိုက်ရတယ်…. နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၇ နာရီထိုးနေပြီ… “ဟာ…သေပြီ…ငါ နိုးစက် ပေးထားတာ ၆ နာရီပါ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ၇ နာရီဖြစ်သွားရတာလည်း ရုံးတော့နောက်ကျတော့မှာပဲ…” ညတုန်းက နှိုးစက်ကိုနာရီမှားပေးထားမိတဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်မ အိပ်ရာပေါ်မှ ကမန်းကတန်းပြေးဆင်းပြီး ရုံးသွားဖို့ အမြန်ပြင်ဆင်ရပါတော့တယ်… ကျွန်မတို့ ရုံးကမနက် ၈ နာရီဆိုရုံးကိုအရောက်ဖြစ်နေရတယ် မဟုတ်ရင် မန်နေဂျာရဲ့အပြောကိုခံရမှာ… အခုလည်းကြည့် ကျွန်မအိပ်ယာထနောက်ကျလို့ ရုံးပါနောက်ကျတော့မယ်… ကျွန်မ မျက်လုံးထဲမှာလဲ ပွစိပွစိပြောနေတဲ့ ဂျာကြီးမျက်နှာကြီးကိုပဲ မြင်ယောင်နေမိတယ်…
ပိုဆိုးတာက ဒီနေ့ နိုင်ငံခြားကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် သူေဋ္ဌး ရုံးကိုပထမဆုံးလာမယ့်နေ့ပါဖြစ်နေတယ်… ကျွန်မလည်း ရုံးသွားဖို့ ပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့ တက်ဆီ ငှါးပြီး ရုံးကို လစ်ရတော့တာပေါ့ရှင်… ရုံးအောက်ရောက်လို့ နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ၇ နာရီ ၅၀ ဖြစ်နေပြီ တော်သေးတာပေါ့ ရုံးကိုမှီတယ်ဆိုရုံလောက်လေးရောက်သွားတာ ကျွန်မ ချက်ချင်းပဲဓာတ်လှေခါးထဲကို အမြန်ဝင်လိုက်မိတယ်… ပြီးတော့ ရုံးးရှိတဲ့ အထပ်ကို နှိပ်ပြီးး တံခါးအပိတ်ကိုစောင့်နေလိုက်တယ်… ဒါပေမဲ့ တံခါးက ပိတ်မသွားဘူး…. ကျွန်မကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်မလိုပဲ ဓာတ်လှေကားစီးမယ့် ယောက်ျားတစ်ယောက် ဓာတ်လှေကားထဲကို ဝင်လာတယ်… သူ့ပုံစံကြည့်ရတာ အထက်တန်းစားထဲကထင်တယ်… အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကို သေသေချာချာ ကျကျနန ဝတ်ထားပြီး… လက်ထဲမှာလည်း ရုံးသုံးလက်ဆွဲအိတ်တစ်ခုကို ကိုင်ထားတယ်… ရုပ်ရည်ကတော့တော်တော့ကို ကြည့်ကောင်းတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ပါ… အရမ်းလည်းဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်…
“အဟွန်းး…အဟွန်း” ကျွန်မသူ့အကြောင်းတွေးနေတုန်း သူက ချောင်းဟန့်လိုက်တယ်… ကျွန်မလည်းသူဆီရောက်နေတဲ့ အကြည့်ကို အမြန်လွှဲလိုက်ရတာပေါ့… ပြီးတော့ သူ့ဘက်ကနေ စကားစပြောလာတယ်… “ဟွာလေ…တစ်မျိုးတော့မထင်ပါနဲ့နော် ဒီကညီမက ဘယ်ရုံးမှာအလုပ်လုပ်တာလဲ မသိဘူး ဗျ” “အော်…ရှင်….ဟုတ်…ကျွန်မက ကုမ္ပဏီကပါ” “ဟာ အဆင်သင့်လိုက်တာဗျာ ကျွန်တော်လည်း အဲ့ရုံးကိုပဲသွားမှာ အပန်းမကြီးရင် ကျွန်တော် ဒီက ညီမနဲ့ အတူတူလိုက်ခဲ့လို့ရမလား” “ဟုတ်ကဲ့…ရပါတယ် ကျွန်မအတွက် အပန်းမကြီးပါဘူး” “အော်…ဒါနဲ့ ဒီက ညီမနာမည်က ….?” “ခက်ခက်ပိုင်…ပါ” “အော်…ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် ကျွန်တော့နာမည်လည်းမှတ်ထားပါ စိုင်းမင်းခန့် လို့ခေါ်ပါတယ်” “အော်…ဟုတ်ကဲ့ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်” ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်လည်း ဒီထက်ပြောစရာ စကားမရှိတော့တဲ့ အတွက် ဓာတ်လှေကားလေးထဲမှာ အရင်လိုပြန် တိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်…
“တင်…တောင်” ဟော…ဓာတ်လှေကားတောင် ရုံးရှိတဲ့ အထပ်ကိုရောက်ပြီ… ကျွန်မနဲ့တူတူပါလာတဲ့ ဟိုလူကို ကျွန်မနဲ့အတူတူလိုက်မှာလားလို့ မေးတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့… “ရှေ့ကနေသွားပါ ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပါ့မယ်” တဲ့… အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်မလဲ ရုံးရှိတဲ့ ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်… ရုံးကို မရောက်ခင် လမ်းချိုးလေးတစ်ခုရောက်တော့ နံရံမှာရှိတဲ့ မှန်ထဲကနေ ဟိုလူ ကျွန်မဖင်တွေကို ဝါးစားတော့ မတက်ကြည့်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်… “ဟာ…ဒီလူ နှာဘူးပဲ ငါ့ဖင်တွေကိုများ အခုပဲ တက်လိုးတော့မယ့် ပုံစံနဲ့ ကြည့်နေလိုက်တာ ပိုးစိုးပက်စက်…” ဆိုပြီး ကျွန်မစိတ်ထဲက ပြောလိုက်မိတယ်…. မကြာပါဘူး ကျွန်မတို့ ရုံးကိုရောက်လာတယ်… ကျွန်မ ရုံးတံခါးကို ဖွင့်ယုံရှိသေးတယ် ရုံးးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံး ပြာပြာသလဲကို မတ်တက်ထရပ်ကြတယ်… ကျွန်မကတော့ ဘာဖြစ်ကြတာလဲပေါ့… နောက်တော့ သူတို့ အားလုံးစီကနေ… “မင်္ဂလာပါ အမ်တီ” ဆိုတဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ပဲ… “ဟိုက်…ဒါဆိုငါနဲ့ပါလာတဲ့သူက သူေဋ္ဌးပေါ့…” ကျွန်မ တစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးတွေတောင်ထသွားတယ်…
“အော်ဘာဖြစ်လဲ…ငါ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာ”ဆိုပြီး… ကျွန်မနေရာမှာ ကျွန်မ ဝင်ထိုင်နေလိုက်တယ်… ကျွန်တော့်နာမည် စိုင်းမင်းခန့်ပါ…. ကျွန်တော်က ခက်ခက်ပိုင် ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စီအီအို ပေါ့… ဒီနေ့ဗျာ ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာပြီး ပထမဆုံးရုံးတက်တဲ့နေ့ပေါ့… အဲ့ ပထမဆုံးး ရုံးတက်တဲ့နေ့မှာပဲ ကျွန်တော် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို မထင်မှတ်ပဲတွေ့လိုက်ရတယ်… သူ့ကိုစတွေ့တုန်းက သူ့မှာဗျာ ဘိုသီဘက်သီနဲ့…ရုံးနောက်ကျလို့ပြေးလာရတဲ့ ပုံစံ… သူ့ ဘောထိ ကလဲ အမိုက်စားဗျ…နို့တွေက ကျွဲကောသီးအလတ်စားလောက်ရှိမယ်… ဖင်ကြီးတွေဆိုတာကလည်းဗျာ…လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း တုံနေတာ… အဲ့ဖင်ကြီးတွေကိုသာ နောက်ကနေစောင့်စောင့်လိုးလိုက်လို့ကတော့ဗျာ ကောင်းလိုက်မယ့် ဖြစ်ချင်း… ကျွန်တော်ကြည့်နေတုန်းရှိသေးတယ် သူက နာရီကို တစ်ချက်ကောက်ကြည့်ပြီး ပြေးသွားတယ်ဗျ… ကျွန်တော်လည်း ကားပေါ်ကနေအမြန်ဆင်းပြီး သူ့နောက်ကို ပြေးလိုက်သွားရတာပေါ့ဗျာ ဒရိုက်ဘာ ဦးလေးကြီးလိုက်ပို့မှာတောင်မစောင့်နိုင်ပါဘူး…
ကံကောင်းချင်တော့ သူစီးမယ့်ဓာတ်လှေကားကို ကျွန်တော်အချိန်မီရောက်သွားတယ်… ဓာတ်လှေကားထဲမှာလည်း ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထဲပဲရှိနေတာဗျ… သူ့မှာဗျာ ကျွန်တော်ဓာတ်လှေကားထဲ ဝင်လာကတည်းက ကြည့်လိုက်တဲ့ အကြည့် တော်တော်နဲ့ကို မခွာဘူး… နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုစကားပြောဖို့အတွက်ချောင်းဟန့်လိုက်တယ်… ပြီးတော့ သူ့ကို ဘယ်ရုံးမှာလုပ်တာလဲလို့မေးလိုက်တော့…သူကကျွန်တော့်ရုံးက ဝန်ထမ်းဖြစ်နေတယ်ဗျ… စားရကံကြုံလို့ မုတ်ဆိတ်ပျားဆွဲတာပေါ့ဗျာ… ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို ဟိုမေးဒီမေးနဲ့ ရုံးကိုမသိလို့ လမ်းပြလို့ရမလားလို့မေးလိုက်တော့…ရပါတယ်တဲ့…. ဒီလိုနဲ့ ရုံးရှိတဲ့ အထပ်ကိုရောက်လာတယ်ပေါ့ဗျာ… သူက ကျွန်တော့်ကို တစ်ချက်လှည့်ကြည့်တယ်… သူနဲ့လိုက်မှာလားလို့မေးတဲ့သဘောပေါ့…. ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ကို အရှေ့ကသွားခိုင်းလိုက်တယ်… အကြောင်းကတော့ သူ့နောက်ပိုင်းအလှကို ခံစားမလို့ပေါ့ဗျာ… ကျွန်တော်လည်း သူ့နောက်ကနေလျှောက်ရင်းနဲ့ သူ့ဖင်တွေကို ကြည့်ရင်း စိတ်ကူးနဲ့ လိုးနေမိတာပေါ့ဗျာ…
ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း အခက်သားဗျ ငယ်ငယ်ထဲက ဇက ခက်ကြီးကြီးရယ်… အားနေ ဂွင်းထုဖို့ပဲသိတာ…နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့တောက်လျှောက်လဲ အဖြူမတွေနဲ့ နေ့တိုင်းလိုလိုကို လိုးဖြစ်နေတာ… အခုမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တော့လည်း ကိုယ်လိုးရမယ့်သူလေးက ကိုယ့်ဆီမှာ အစဉ်သင့်ကိုရှိနေပြန်ရော…. ကျွန်တော်က တွေ့ရာမိန်းမ မလိုးတတ်ဘူးဗျ… ကဲကဲ…ကျွန်တော့်အကြောင်းပြောတာလေးတွေ ခဏရပ်ရအောင်… ခုနက ကျွန်တော်ပြောတယ်မလား သူက ကျွန်တော့်ရှေကလျှောက်တယ်လို့… အဲ့လိုနဲ့ ခဏနေတော့ ရုံးကိုရောက်လာတယ်ပေါ့ဗျာ… ရုံးထဲဝင်ဝင်ချင်း အားလုံးကပြာပြာသလဲ ထနှုတ်ဆက်ကြတယ်… သူကတော့ ခဏလောက် ကြောင်အမ်းအမ်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ… ကျွန်တော်လည်း အားလုံးကို ပြန်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ ဂျာကြီးက ကျွန်တော့်ကို ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်… ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရုံးခန်းကိုလိုက်ပို့တယ်… “ဂျာကြီး…ကျွန်တော့်အတွက် အတွင်းရေးမှူးးစီစဉ်ပေးထားလား” “ဟာ…အမ်တီ ကျွန်တော် အဲ့တစ်ခုကိုမေ့သွားတယ်ဗျာ…
ကျွန်တော့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါ…ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးစီစဉ်လိုက်ပါ့မယ်” “ကဲပါဗျာ…စီစဉ်မနေနဲ့တော့…ခုနက ကျွန်တော်နဲ့ပါလာတဲ့ တစ်ယောက်ကိုပဲ ခန့်လိုက်…” “ဗျာ…” “ကျွန်တော်ပြောတာ မရှင်းးလို့လား…” “မ…မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောလိုက်ပါ့မယ်” ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့် ဂွင်နဲ့ကျွန်တော် ဂွင်ဖန်လိုက်တာပေးဗျာ သူ့ကို ကျွန်တော့် အတွင်းရေးမှူ းခန့်….ပြီးရင်တဖြေးးဖြေးနဲ့ပျိုးယူ…ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် အဆင့်တွေတက်ပြီး လိုးကြဆော်ကြပေါ့ဗျာ… အခုခေတ်မှာ သူေဋ္ဌးနဲ့ အတွင်းရေးမှူ းဇာတ်လမ်းကလည်း တစ်ခေတ်ထနေတာမလားဗျ… ခက်ခက်ပိုင် ခဏနေတော့ ရုံးက လက်ထောက်မန်နေဂျာ အဒေါ်ကြီးက ကျွန်မကိုလာခေါ်တယ်… “ပိုင်ရေ…သမီးကို ဂျာကြီးခေါ်နေတယ်”တဲ့… အမလေးလေး အဲ့ဒါခေါင်းကို ဆင်နင်းတာပေါ့ မနက်တုန်းက ရုံးနောက်ကျတဲ့ ကိစ္စကို ဆူတော့မယ်ထင်တယ်… ကျွန်မလည်း လေးလံတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ဂျာကြီးအခန်းထဲဝင်လာလိုက်တယ်…
“ဂျာကြီး ပိုင့်ကို ခေါ်တယ်ဆိုလို့ပါ…” “အော်…အေးအေး ထိုင် နင့်ကို ဝမ်းသာစရာသတင်း တစ်ခုပြောစရာရှိတယ်” “ဘာများလဲမသိဘူး ဂျာကြီး…” “အေး…ငါပြောရင်တောင် နင်ယုံမှာမဟုတ်ဘူး…ဒီနေ့မှရောက်တဲ့ သူေဋ္ဌးက ဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ် မသိပါဘူး…နင့်ကို သူ့ အတွင်းရေးမှူ းခန့်ပေးပါတဲ့…အဲ့ဒါ နင်နောက်နေ့က စပြီး သူေဋ္ဌးအတွင်းရေးမှူးးရာထူးနဲ့ အလုပ်ဆင်းပါ” “ရှင်…ဘယ်လို ဘယ်လို ကျွန်မက သူေဋ္ဌးရဲ့ အတွင်းရေးမှူးးလုပ်ရမယ်” “အေးဟုတ်တယ်ဟာ…ငါ့ကိုစကားလာမများနဲ့ ဒီမှာ အလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်…ကိုယ့်အလုပ်ကို သွားလုပ်တော့” “ဟုတ်…ဟုတ်ကဲ့” ကျွန်မ အရမ်းကိုထူးဆန်းနေတယ်… အခုမှတွေ့ဖူးပြီးးသူကို အဲ့လူဘယ်လိုအရည်အချင်းရှိမှန်းမသိပဲ အတွင်းရေးမှူးးရာထူးခန့်တယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားစရာပဲ… မနက်တုန်းကလည်း သူကျွန်မဖင်တွေကို တက်လိုးတော့မယ့်အတိုင်းကြည့်နေတာမလား… အော်…ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လစာတိုးလာတော့ကျွန်မအတွက် ပိုလို့တောင်မှ ကောင်းသေးတယ်…
သူတက်လိုးတော့ရော ဘာဖြစ်လည်းးး ခံလိုက်ရုံပဲပေါ့… ကံကောင်းရင် သူေဋ္ဌးမိန်းမတောင် ဖြစ်ဦးမယ်… နောက်နေ့မနက်… ကျွန်မ အလုပ်ကို ခါတိုင်းနေ့တွေထက် ပိုပြီးစောစောလာခဲ့တယ်… ကျွန်မ အလုပ်စားပွဲတွေ နေရာရွေ့ပြီး ရှင်းရလင်းရဦးမှာမလား… ကျွန်မ ရုံးကိုရောက်တော့ ၇ နာရီတောင်မထိုးသေးဘူး…ဘယ်သူမှတောင်မရောက်သေးဘူး… အဲ့တော့ ကျွန်မလည်း ကျွန်မရဲ့ စားပွဲနေရာဟောင်းလေးကို ရှင်းပြီး လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို စက္ကူ ပုံးထဲထည့်ပြီး ယူလာလိုက်တယ်… ပြီးတော့ သူေဋ္ဌးအခန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ စားပွဲနေရာသစ်လေးမှာ ပစ္စည်းတွေကိုနေရာချတယ်… တစ်အောင့်လောက် ကြာတော့ အခန်းထဲကို လူတစ်ယောက်ဝင်လာတယ်… ကျွန်မကြည့်လိုက်တော့ အမ်တီဖြစ်နေတယ်…. “ဟာ…အမ်တီတောင် ရောက်ပြီလား…ထိုင်ပါ…ပိုင်…ကော်ဖီဖျော်လိုက်ရမလား…” “ဟာ…နေပါဗျာ မခက်ခက်ပိုင်ရယ် ကျွန်တော်အတွက် အလုပ်တွေ ပိုနေပါ့မယ်” “အော်ရပါတယ်…ဆရာရယ် ပိုင် ဖျော်လိုက်ပါ့မယ် အော်…ဒါနဲ့ ဆရာ ပိုင့်ကို နာမည်ခေါ်ရတာ ခက်နေရင် သူများတွေခေါ်သလို…ပိုင်…လို့ပဲခေါ်နိုင်ပါတယ်”
“ဒါဆိုလဲ ပိုင် ခေါ်စေချင်သလို ပိုင်လို့ပဲခေါ်ပါ့မယ်” “ဟုတ်…ဟုတ်” ကျွန်မလည်း သူေဋ္ဌး သောက်ဖို့ကော်ဖီဖျော်ပြီး အခန်းထဲပြန်လာလိုက်တယ်… “ဆရာ ဒီမှာ ကော်ဖီရပါပြီ…” “အော်…ဟုတ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ…ဒါနဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ လချုပ်စာရင်းတွေကဘယ်မှာရှိတာလဲဗျ ကျွန်တော်မသိလို့” “အော်…ဟုတ်သားပဲ ဆရာက အခုမှရုံးကို ရောက်တော့ ဘယ်သိပါ့မလဲ…ပိုင်ပြပေးပါ့မယ်” ကျွန်မလည်းး သူေဋ္ဌးရဲ့ စားပွဲနားသွားပြီး သူသိချင်တာတွေကို ရှင်းပြနေလိုက်တယ်… “အဲ့ဒါတွေက ဒီ ဖိုင်ထဲမှာ ရှိတယ် ဒီထဲဝင်ပြီးးးး……” ကျွန်မကသာ အပင်ပန်းခံ ရှင်းပြနေတာ သူကတော့ ကျွန်မရဲ့ ဟိုက်နေတဲ့ အကျႌလည်ပင်းကြားထဲကနေ ပေါ်နေတဲ့ နို့တွေကို ကြည့်နေရတာနဲ့တင်…ကျွန်မ ပြောတာတွေ ကြားပါ့မလားမသိပါဘူး ကျွန်မလည်း ရှင်းသာရှင်းနေရတာ စိတ်က သိပ်မပါချင်တော့ဘူး… မပါဆို ကိုယ့်ရဲ့ နို့တွေကို အရွယ်ရောက်ယောက်ျားတစ်ယောက်က ရမက်အပြည့်နဲ့ကြည့်နေတာကို ခံနေရတယ်မလား… ကျွန်မ စောက်ဖုတ်ထဲမှာတောင် ယားကျိကျိ ဖြစ်လာတယ်…
အခုပဲ ကျွန်မကိုတက်လိုးပါတော့ရှင်လို့တောင်ပြောချင်နေတာ… ဒါပေမဲ့လည်း ကျွန်မရဲ့သိက္ခာကရှိသေးတယ်မလား… ကိုယ့်သိက္ခာကိုတော့ကိုယ်ထိမ်းသိမ်းရမှာပေါ့… အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မလည်း လိုအပ်တာလောက်လေးပဲ ရှင်းပြပြီးတော့ ကိုယ့်နေရာကိုယ် ပြန်ထိုင်နေလိုက်တယ်… နောက်မကြာပါဘူး အမ်တီက အပြင် သွားမလို့ဆိုပြီးထသွားတယ်… ကျွန်မလည်း ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်နေရင်းနဲ့ ရေဆာလာသလိုရှိတာနဲ့ ရေထသောက်တော့ အခန်းထဲက ရေဘူးထဲမှာ ရေကကုန်နေပြီ… အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း ရုံးနောက်ဖေးက ရေဘူးမှာရေသွားခပ်ရတာပေါ့… ရေခပ်ပြီးပြန်လာတော့ အိမ်သာရှေ့လည်းရောက်ရော ကြားလိုက်ရတဲ့အသံက… “အား…ရှီးးး…အားအား…ကောင်းလိုက်တာ ပိုင်ရယ်…ပိုင့်စောက်ပတ်လေးက လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာ…အားး…ရှီးးး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ကုံးပေးထား အဲ့ဒါမှလိုးလို့ကောင်းတာ…အားး…ပြီးပြီ…ပြီးပြီ…အားးးး” “ဟာ…ဒါ…ဒါဆရာ့အသံပဲ…ငါ့ကို မှန်းးပြီးထုနေတာဖြစ်မယ် ဘာတဲ့ ငါ့စောက်ပတ်က လိုးလို့ကောင်းတယ် ဟုတ်လား လိုးလို့ကောင်းမကောင်းဆိုတာ ဆရာ နောက်ကျရင်သိရမှာပါ…
ဟင်း ဟင်း” ကျွန်မလည်း ခြေသံဖွဖွနင်းပြီး သူမသိအောင်ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ် ရုံးခန်းထဲပြန်ရောက်တော့ သူ့ကိုမြူဆွယ်ဖို့ အကြံထုတ်ရတာပေါ့… “ဟာ…သိပြီ ငါ့ပင်တီကို ချွတ်ထားလိုက်မယ် ပြီးရင် သူမမြင်မြင်အောင်အောက်စလွတ်ပြမယ်… သူငါ့စောက်ပတ်ကိုမြင်ရင်တော့ ဘယ်လိုမှနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး…ဟင်း ဟင်း တွေ့ကြသေးတာပေါ့ ဦးစိုင်းမင်းခန့်ရယ်” ကျွန်မလည်း ကျွန်မရဲ့အစီစဉ်အတိုင်း ပင်တီကိုချွတ်ထားပြီး သူပြန်အလာကိုစောင့်နေလိုက်တယ်… ဒီလိုနဲ့တအောင့်လောက်ကြာတော့ သူရုံးခန်းထဲပြန်လာပြီး သူ့စားပွဲမှာ သူထိုင်တာပေါ့… သူုစားပွဲနဲ့ကျွန်မစားပွဲက မျက်နှာချင်းဆိုင်လောက်ကျတယ်… အဲ့ဒီတော့ ကျွန်မအောက်စလွတ်ရင်သူမြင်မှာသေချာတယ်… ဒီတော့ ကျွန်မလည်း ကျွန်မအစီအစဉ်အတိုင်း ပေါင်းနှစ်ချောင်းကိုလိုအပ်တာထက် ပိုကားပြီးထိုင်လိုက်တယ်… ကျွန်မတို့ ရုံးဝတ်စုံက ဒူးလောက်ပဲရှိတာဆိုတော့ အပေါ်နည်းနည်းလေးဆွဲတင်ပြီး ပေါင်ကားလိုက်ရင် စောက်ပတ်ကမမြင်ချင်မှအဆုံး… ဖြဲထားသလိုဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်မစောက်ပတ်က တစ်ချက်တစ်ချက်လေအဝှေ့မှာဆိုရင် အေးကနည်း အေးကနည်း ဖြစ်သွားတာလည်း ဖီးတစ်မျိုးပေါ့ရှင်… သူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ ပေါ်နေတဲ့ကျွန်မစောက်ပတ်ကို ကြည့်နေလိုက်တာ သူ့မျက်လုံးနှစ်လုံးလုံး ကျွန်မစောက်ပတ်ကိုလာကပ်တော့မယ့်အတိုင်းပဲ…
ကျွန်မလည်း ကျွန်မအကြံအစည်အောင်လို့ ကြိတ်ပြီးဝမ်းသာနေတာပေါ့… ခဏလည်းကြာရော သူက… “ပိုင်ရေ ဒီနေ့နောက်ကျမှဆင်းလို့ရမလား…” “ရှင်…ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဆရာ” “အော်ဆရာ့ကို ကုမ္ပဏီစာရင်းတွေရှင်းပြခိုင်းမလို့ပါ ရတယ်မလား အိမ်ပြန်နောက်ကျရင်လည်း မပူနဲ့နော် ဆရာကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးမယ်” “ဟုတ်ကဲ့…ရပါတယ် ကိစ္စမရှိပါဘူး ပိုင်နေပေးလို့ရပါတယ်” ဟင်း…ဟင်း ကျွန်မသိသားပဲ သူကျွန်မကိုလိုးရဖို့ ဂွင်ဆင်နေပြီဆိုတာ… ဒီလိုနဲ့ ရုံးဆင်းချိန်ရောက်တော့ သူများတွေ အလျှိုလိျှုပြန်သွားကြပေမဲ့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ကတော့ မပြန်ရသေးဘူး… “ပိုင်ရေ ဆရာကို ဒါတွေတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါလား” “ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ” ကျွန်မလည်း သူ့ကိုရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဟာတွေအားလုံးရှင်းပြလိုက်တယ်… သူကတော့ တအင်းအင်းနဲ့ နားလည်တာလား နားမလည်တာလားမသိ… ကျွန်မတို့ရုံးက ညနေ ၆ နာရီဆိုဆင်းပြီလေ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့တော့ သူ့ကိုအလုပ်ကိစ္စတွေရှင်းပြနေတာနဲ့ ည ၈ နာရီတောင်ထိုးသွားတယ်… အားလုံးလည်းပြီးသွားရော သူက ရိသဲ့သဲ့စကားတွေစပြောလာတယ်…
“ပိုင်…ပိုင်ကရည်းစားမထားဘူးလား” “အရင်တုန်းကတော့ထားပါတယ် အခုတော့မထားဖြစ်တာ ကြာပါပြီ” “ဟုတ်လား ဒါဆိုဆာနေမှာပေါ့…ဟက် ဟက်” “ရှင်…ဘာကိုပြောတာလဲ” “အော်…ဆာနေမှာပဲလို့…” “ဟင်…ပိုင်နားမလည်ဘူး” “ခက်တော့တာပဲ ဒီကလေးမတော့ လီးကိုပြောတာ လီးကိုပြောတာ” “ဟာ ဆရာကလည်း ဘာတွေလျှောက်ပြောနေမှန်းမသိဘူး” “ဆရာလျှောက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာ… ပိုင့်လိုအပ်ချက်တွေကို ဆရာဖြည့်ဆည်းပေးချင်လို့ပါ…ဟင်း ဟင်း” ဆိုပြီးတော့ ကျွန်မနှုတ်ခမ်းတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့လာနမ်းပါတော့တယ်… “ပြွတ်…ပြွတ်….” ကျွန်မလည်း နဂိုထဲက ဒီလိုဖြစ်စေချင်နေတာဆိုတော့ မငြင်းပဲနဲ့ တန်ပြန်အနမ်းတွေပေးလိုက်တယ် ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် အနမ်းမိုးတွေရွာတော့တာပေါ့… အဲ့လိုနဲ့ သူ့လက်တွေက ကျွန်မနို့တွေကိုလာညှစ်တော့တယ်… “အားးး…ဆရာရယ် နာတယ်…အဟင့် အဟင့်” “ဘာ ဆရာလဲကွာ ကိုလို့ခေါ်ကွာ နော် ပိုင်လေးနော်” “ဟုတ်ပါပြီ ကိုရယ် ကျေနပ်ပြီလား” “ကဲ ပိုင်လေး အကျႌတွေချွတ်လိုက်ကွာ လိုးချင်နေပြီ” “အင်း…ချွတ်လိုက်မယ် ခဏလေး”ဆိုပြီး အကျႌတွေကို ချွတ်ပြီးဖင်တုံးလုံးနဲ့ သူ့ရှေ့ကိုသွားရပ်လိုက်တယ်… “ဟားးး…လှလိုက်တာပိုင်လေးရာ လာဒီစားပွဲပေါ်ထိုင်လိုက် ကိုဘာဂျာကိုင်ပေးမယ်” “တကယ်လား ခစ်ခစ်” ကျွန်မလည်းသူခိုင်းတဲ့ အတိုင်းစားပွဲပေါ်တက်ပြီး ပေါင်ကားပေးထားလိုက်တယ်…
“စောက်ပတ်လေးက လိုးချင်စရာလေးကွာ ချစ်စရာလေး” ဆိုပြီး ကျွန်မစောက်ပတ်ကို ကုန်းယက်ပါတော့တယ် စောက်စိလေးကို ဖြေးဖြေးလေးကိုက်ပြီးတော့ စောက်ပတ်တစ်ခုလုံးကို လျှာနဲ့အပြားလိုက်ယက်ပြီး ဆွဲဆွဲ စုပ်တယ်… ပြီးတော့ စောက်ခေါင်းထဲကို လျှာထိုးထည့်ပြီးတော့ လျှာနဲ့လိုးပေးတော့ ကျွန်မမှာ ထွန့်ထွန့်လူးပြီး တစ်ချီပြီးသွားရတာပေါ့ရှင်… ကျွန်မပြီးသွားလို့ငြိမ်ကျသွားတော့မှ သူ့မျက်နှာကို ကျွန်မစောက်ပတ်က ခွာလိုက်တယ်… ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ၈လက်မနည်းနည်းရှိတဲ့လီးကြီးကို ထုတ်ပြီး စုပ်ခိုင်းတယ်… “ပိုင်လေး ကိုယ့်လီးကို စုပ်ပေးကွာ…ရော့” ဆိုပြီးတော့ ကျွန်မပါးစပ်ကို သူ့လီးနဲ့လာတေ့တယ်… ကျွန်မလည်းသူ့လီးကို ကိုင်ပြီး ဒစ်ကို ရေခဲချောင်းစုပ်သလိုစုပ်ပြီးတော့ ဥတွေကိုလက်နဲ့ကစားပေးပြီး လီးတစ်ချောင်းလုံးကို အားရပါးရလွေပေးလိုက်တယ်…
“အားးး…ရှီးးး…ပိုင်လေး တော်ပြီ တော်ပြီ တော်ကြာ ပြီးသွားလို့မလိုးနိုင်ပဲနေမယ်” “ဟုတ်ပါပြီရှင် ရပ်လိုက်ပါပြီ လိုးပါ လိုးပါ” “ဟား ဟား လိုးမှာ လိုးဦးမှာ” သူက သူ့လီးကို အရင်းကကိုင်ပြီးတော့ ကျွန်မစောက်ပတ်ကိုတေ့လိုက်တယ်… ပြီးတော့ ဖြေးဖြေးချင်း ဖိသွင်းပြီး စလိုးတော့တယ်… “ဗြစ်…ဗြစ်…ဖွတ်…ဖလပ်…ဖက်…ဖက်” “အားးး ပိုင့်စောက်ပတ်လေးက ကြပ်နေတာပဲကွာ လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာ…အားးး…ရှီးး” “အား…ကို စောင့်စောင့် ပိုင့်ကို မငြှာနဲ့ ပိုင့်စောက်ပတ်ကွဲရင် ကွဲသွားပစေ စောင့်ပြီးလိုးပေး…. အားးး ရှီး အားးး…လိုးလိုး” “အား ပြီးတော့မယ် အားးး ရှီးးး ကောင်းလိုက်တာကွာ…အားး အား ပြီးပြီ ပြီးပြီ အားးး” “ကို ပိုင့်စောက်ပတ်ထဲကို ကို့လရေတွေပန်းထည့်လိုက် အပြင်မထုတ်နဲ့….အားး…ရှီးးး” “ဗြစ်…ဗြစ်” အဲ့လိုနဲ့ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ လိုးပွဲကြီးက မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ပြီးသွားတာပေါ့ရှင်… ပြီး
Categorized as အင်းဆက် Tagged မြိုင်မြိုင် ဆိုင်ဆိုင်